Bizina: Vermifuge, hypotensive, depurative, antibiotika ary antiseptika - Afrikhepri Fondation
talata 18 Mey 2021
Fifandraisana FAHASALAMANA SY FAMONJENA
Vakiteny: 8 min
DTany Egypt fahiny, tongolo lay no be mpampiasa. Nozaraina maimaimpoana tamin'ny mofo ho an'ireo mpanao piramida. Tena ankasitrahana, ity farany dia tsy nisalasala nandà tsy hiasa raha ahena ny sakafo. Ny tongolo gasy dia efa nekena tamin'ny tanjaka sy fiarovana amin'ny aretina aterany. Hitantsika izany amin'ny sarcophagi an'ny piramida, izay nanampiany ny maty hanao ny diany any an-dafin'ny rano. Ny tongolo gasy dia nampiasaina ho an'ny mummification ihany koa, ary nalaza noho ny fiasa mahery nataony tamin'ny bibilava. Ny hebreo nandritra ny famoahana tany amin'ny 1250 talohan'i JK dia nihevitra ny tongolo lay ho entam-barotra sarobidy indrindra nilaozana tany Egypt. Tany an-tany efitra, hoy i Mosesy, ny sasany tsy nisalasala nitaraina, araka ny Bokin'ny Nomery (fahefatra amin'ny boky dimy voalohany mandrafitra ny Torah): 'tongolo gasy'.
Ny tongolo gasy koa dia manana tantaran'ny fampiasana fanafody Ayurveda. Ity rafitra fanasitranana indiana taloha ity dia nampiasa tongolo lay ho toy ny fanafody raokandro izay afaka manafana ny vatana, manatsara ny fivezivezen'ny rà, ary manasitrana ny aretin-kibo.
Tongolo gasy vaovao, rehefa voahitsakitsaka na potehina, dia mamokatra allicin miaraka amin'ny fananana antibiotika ekena sy ajoene izay anticoagulant. Izany no mahatonga ny tongolo lay ampiasaina ho prophylactic amin'ny aretina isan-karazany: fivalozana, typhoid, kolera, pesta, dipteria.
Ny tongolo gasy koa dia manampy amin'ny ady amin'ny fiakaran'ny tosidrà satria miteraka vasodilation capillary. Ho fanampin'izany, allicin dia manana fihetsika manakana ny fivontosana, noho izany ny lazany ho toy ny mpitsabo mpanohitra homamiadana.
Amin'ny ankapobeny, ny tongolo lay dia manana andiam-panafody mahavariana fantatry ny mpahay siansa: antiseptika, bakteria, déparative, diuretic, dewormer, anti-cancer, febrifuge, aphrodisiac, hypotensive. Izany dia manazava ny antony nandinihana azy hatramin'ny andro taloha ho toy ny tena panacea.
Ny zavamaniry iray manontolo, fa indrindra ny jiro, dia misy alliin (sulfur glucoside), anzima (alliinase), vitamina A1, B1, B2, C ary niacin (vitamina B complexe). Tsy misy fofona i Alliin, fa eo ambanin'ny asan'ny alliinase, izay miasa rehefa nokapohina ny tongolo lay dia lasa allicin aloha izy ary avy eo disulfide diallyl (ny fototarazon'ny glucoside), izay ireo akora ilaina mavitrika indrindra ary manome azy ny fofona mahazatra.
Alliin sy diamondra disulfide dia akora miovaova be, izay mora levona anaty rano sy gazy. Entin'ny rà izy ireo, ka manenika ny taova sy ny vatan'ny vatana rehetra. Noho izany dia mihetsika amin'ny vatana iray manontolo izy ireo, saingy misy hery lehibe kokoa amin'ny taova nanesorana azy ireo: ny havokavoka sy ny bronchi, ny voa ary ny hoditra.
Ny fananana tongolo lay maro dia azo fintina toy izao:
Amin'ny fatra avo, ny tongolo lay dia miteraka fihenan'ny tosidra, na ambony indrindra na farafaharatsiny. Izy io dia manana hetsika vasodilating, ka izany no antony nanolorana tena ho an'ireo marary mijaly noho ny fiakaran'ny tosidra, ny arteriosclerosis ary ny fo (angina pectoris na infarction). Ny tongolo gasy dia sakaiza lehibe amin'ny rafi-pandrefesana.
Ny tongolo lay dia miasa ho toy ny antiplatelet agents (manohitra ny fironana platelets mihosin-drà be loatra mba hiangona miaraka) ary toy ny fibrinolytic (mamoaka fibrin, ny proteinina izay mamorona lalan-drà). Manampy amin'ny fampitomboana ny tsiran'ny ra izany, ka izany no antony anolorana azy ireo ho an'ny olona trombosis, embolisme na tapaka lalan-dra noho ny tsy fahampian'ny famatsian-dra.
Mampihena ny tahan'ny kolesterola LDL (kolesterola ratsy) ao anaty ra izany, angamba satria manasarotra ny% hitroka azy amin'ny tsinainy. Naseho fa mandritra ny ora maro aorian'ny fisotroana sakafo maraina mifototra amin'ny masaka voatoto dia mitombo 20% ny haavon'ny kolesterola; fa raha kosehinao amin'ny tongolo gasy be dia be ny mofo ary asiana dibera dia tsy atao io fiakarana io. Ity fandinihana siantifika ity dia navoaka tao amin'ny Indian Journal of Nutr (vol. 13, lah. 1).
Koa satria ny tongolo lay mampitsangana ny haavon'ny glucose ao anaty ra, ny diabeta sy ny olona matavy dia mahazo tombony amin'ny fampiasana azy (ankoatry ny fepetra fitsaboana hafa), ary koa ireo izay manana diabeta amin'ny tantaram-pianakaviana, ho fepetra fisorohana.
Antibiotika sy antiseptika ankapobeny
Nandritra ny dimam-polo taona teo ho eo, ny fikarohana dia natao momba ny toetra fanoherana ny aretina amin'ny tongolo lay. Ny hetsika antibiotika dia voaporofo na in vivo na in vitro manohitra ireto zavamiaina bitika manaraka ireto:
Escherichia coli, izay miteraka dysbacteriosis ny tsinay sy otrikaretina mihetsiketsika
Salmonella typhi, tompon'andraikitra amin'ny tazo typhoid sy ireo karazana hafa an'ny Salmonella izay miteraka aretina mikraoba amin'ny tsinay
Shigella disenteriae, ny antony mahatonga ny tsy fihanaky ny bacillary
staphylococci sy streptococci miteraka vay sy aretin-koditra hafa;
holatra amin'ny karazany rehetra, masirasira ary viriosy sasany, toy ny herpes. Inoana fa ny akora ilaina amin'ny tongolo lay dia mifangaro amin'ny asidra nokleikan'ny virus, ka mametra ny fiparitahany.
Ny herin'ny bakteria amin'ny tongolo lay ao amin'ny tsinay dia mifantina amin'ny bakteria pathogenika, ka manaja ny flora saprophytic mahazatra, izay mahasoa. Manana an'io tombony io amin'ny ankamaroan'ny antibiotika fantatra izy, satria mifehy ny zavamaniry tsinay fa tsy manimba azy.
Ny fampiasana azy dia voamarika fa:
amin'ny karazana aretim-pivalanana, gastroenteritis sy colitis;
ao amin'ny salmonellosis (aretina entin-kafe matetika vokatry ny sakafo voavira);
amin'ny tsinay dysbacteriosis (fahasimbana mikraoba mikraoba ao amin'ny tsinay), matetika vokatry ny fampiasana antibiotika;
amin'ny fermentation dyspepsia, izay mamokatra entona ao amin'ny zanatany.
amin'ny otrikaretina urinary (cystitis sy pyelonephritis), matetika ateraky ny Esckerichia coli;
amin'ny bakteria miteraka (bronchitis acute sy chronic), satria rehefa esorina ny dialyl disulfide amin'ny lalana respiratory, dia mivantana mivantana amin'ny moka bwonchial. Ankoatra izany, dia marefo sy manohitra ny fanoherana.
Mampirisika ny fiarovana
Ny tongolo lay dia mampitombo ny asan'ny sela mpiaro ny vatana, ny lymphocytes ary ny macrophage. Ireo sela ireo, izay mivezivezy ao anaty rà, dia miaro antsika amin'ny zavamiaina bitika ary koa afaka mamotika ireo sela voan'ny homamiadana, farafaharatsiny amin'ny dingana voalohany amin'ny fivontosan'ny fivontosana.
Ny fihinanana tongolo lay dia misy fiatraikany mahasoa amin'ny areti-mifindra rehetra, satria mampitombo ny hery fiarovan'ny zavamiaina misy antsika io, ary manimba ny zavamiaina bitika sasany kosa. Ny tongolo gasy dia nampiasaina tamim-pahombiazana ho famenony amin'ny fitsaboana SIDA.
Mafy ny herisetra
Manohitra ny katsentsitra tsinay matetika. Ny tongolo lay dia miasa mavitrika amin'ireo kankana sy pinworm (kankana fotsy kely izay miteraka mangidihidy amin'ny zaza).
Toning ny vatana sy ny depurative
Ny tongolo lay dia mampihetsika ny fihetsika simika ao amin'ny metabolisma ary mampiroborobo ny fizotry ny fako ny fako (catabolism). Izany no antony ilazana azy amin'ny toe-pahalemena na harerahana, tsy fahazotoana ary residu asidra be loatra (gout, vanin-taolana, rheumatisme sasany).
Ny tongolo gasy dia atolotra manokana amin'ny fitsaboana fanoherana sigara. Manome normal ny tosidran'ny mpifoka sigara amin'ny ankapobeny, mampiroborobo ny famongorana phlegm voatazona ao amin'ny bronchi sy ny famerenana amin'ny laoniny ny fonony moka. Manampy amin'ny ady amin'ny faniriana hifoka izany, angamba noho ny fofona mahazatra omeny ny fofonaina.
Mialà sasatra maloto
Manokana homamiadana fandevonan-kanina. Izany dia mety noho ny fiasa mifehy ny flora amin'ny tsinay sy ny fampandehanana ara-dalàna ny fiasan'ny digestive. Saingy, mety misy ifandraisany amin'ny asany amin'ny fihetsika simika rehetra ao amin'ny zavamananaina (metabolism).
Ny sasany dia nilaza fa manasitrana fivontosana homamiadana amin'ny tongolo lay, izay, araka ny hevitray, tsy manana siansa siantifika ary manome fanantenana diso an'ireo marary. Araka izany, mandritra ny fotoana fohy dia tsy afaka manoro azy io fotsiny isika ho fisorohana.
Apetaka amin'ny tongolo lay voapotsitra ny kalosy, amboarina amin'ny fehy fametahana na kofehy. Afaka roa na telo andro dia mihalefaka sy mamaha ny kalsa, ary manamora ny famoahana azy.
Tongolo gasy (Allium ursinum L.) dia tongolo lay dia izay manana toetra mitovy amin'ny tongolo lay ambolena, na dia tsy dia tsara loatra aza ny fandeferana mandevon-kanina.
Ity zaridaina dia ity dia tsy ambolena satria, ankoatry ny fanaparitahana azy betsaka, dia tsy azo tazomina izy raha mbola tongolo lay tsotra ihany, miaraka amin'ny fananana mitovy sy fanta-daza kokoa.
Ny tongolo gasy dia tokony hohanina vaovao, satria rehefa maina dia very ny vokany.
Pra © fampitandremana
Ny fampiasana tongolo lay amin'ny fatra avo, indrindra ny manta na ny fitrandrahana, dia tsy soso-kevitra raha misy rà. na mampivadi-po (maratra, lozam-pifamoivoizana, sns.) na fadimbolana (vanim-potoana mavesatra).
Raha jerena ny fihetsika mihosin-dra amin'ny ra, ny tongolo lay amin'ny fatra be dia afaka manalava ny rà mandriaka ary manasarotra ny fizotry ny fikitihana.
Ny fitohizan'ny fampiasana tongolo lay avo lenta dia tsy asaina mandritra ny fitondrana vohoka.
Tongolo gasy mainty Vegavero® | 6000 mg: Ny fatra avo indrindra | Tsy misy Additive artifisialy | Notsapaina tao ...
Vidio € 20,90
Fonosin'ny tongolo lay tsy misy fofona tsy misy fofona 15000mg - 180 Softgels huile tongolo tsy misy fofona ...
Vidio € 17,99
Tongolo mainty tongolo mainty (kapsula 180 amin'ny 600 mg) - 9000 mg: ny fatra avo indrindra - 100% ...
Vidio € 23,90
Garlic Bio 280mg - kapsily legioma 200
2 vaovao avy amin'ny € 9,99
Vidio € 9,99
Tongolo gasy tsy misy fofona 2mg | 360 Capsules | Ny hatsaran'ny tongolo lay rehetra tsy misy tsiro na fofona | Hatramin'ny 1 ...
2 vaovao avy amin'ny € 15,95
Vidio € 15,95
Tongolo gasy tsy misy fofona HSN 20mg | Tongolo fotsy | Tongolo gasy tsy misy fofona 100: 1 | Fifantohana 100: 1 izay ...
2 vaovao avy amin'ny € 15,24
Vidio € 19,90
Tongolo gasy 500mg - Tsy misy fofona - hanalana kapsily 100: 1 - 100 - kalitao alemanina
Vidio € 9,95
Nohavaozina farany tamin'ny 18 Mey 2021 7:48 PM
Pejy mety tianao
Ny fotokevitra metafisika fito momba ny olona
Fampidirana ho an'ny Gnosis - Samael Aun Weor (PDF)
Fandalinana sy fanaon'ny yoga - Swami Sivananda (PDF)
Laurent Gbagbo sy Charles Blé Goudé nalain'ny Fitsarana Iraisam-pirenena ho an'ny heloka bevava
Teknika NLP - Martin Levitz (Audio)
Mizarà ny lahatsoratrao